Iinkonzo kunye neengozi zeZinto ezi-9 eziDlakadlaka eziNgcono- Yokwakha iDiski yakho - Iingcebiso Zolungiso Lwengcali
URoger Davies / OTTO
Kuthekani ukuba ungabamba itheko lesidlo sangokuhlwa se-al fresco kwidesika yabucala? Okanye ubukele ilanga litshone kunye necocktail emva kosuku olude lomsebenzi? Iidiski yindawo yokubonakalisa njengokuzonwabisa nokuba ijikeleze umhlaba ongaphakathi ipuli yokuqubha okanye njenge ibhalkhoni ulwandiso ngaphambili okanye ngasemva, kodwa iinketho xa usenza uyilo zinokuziva zinzima. I-fiberglass okanye ikhonkrithi? Ukuhonjiswa kweenkuni okanye ingca?
Ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali ukuya kunyango lwasemva kwexesha, zininzi izinto ezisebenzayo xa ukhetha ezona zinto zintle zekhaya lakho. Ngelixa iinkuni ngaphambili zazintle kakhulu, kodwa ngoku zininzi izinto onokukhetha kuzo. Nangona kunjalo, yazi ukuba zonke azenziwanga zilingana. Apha ngezantsi, jonga ngokweenkcukacha nganye.
Uyilo lwasekhaya lwe-3d kwi-intanethi
UMFANEKISO: Ihlathi leFeliks; Uyilo: iArente kunye nePyke
Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni
Eziluncedo: Olu lolona khetho luthandwayo ngoku, lusetyenziswa phantse kwiipesenti ezingama-75 zazo zonke iipakethe ezintsha. Kuba iinkuni ziye zanyangwa ngemichiza ukumelana nokubola, ukungunda kunye nezinambuzane, abantu bathambekele ekuthambekeni kuyo-kwaye nexabiso layo eliphantsi ($ 1.50 ukuya kwi-2.50 yeenyawo ngonyawo wesikwere) ayilimazi nokuba. Itholakala kakhulu kuyo yonke indawo, kwaye kulula ukuyikhawuleza.
Bendlela: Ulondolozo ngokuqinisekileyo lungumcimbi kolu hlobo lwezixhobo zokuhombisa-lunotyekelo lokuqhekeka okanye ukujijisana ngokuhamba kwexesha. Kwixesha elidlulileyo, iinkuni ezanyangwa ngoxinzelelo zazinyangwa nge-chromated arsenate yobhedu, ekrokrelwa i-carcinogen. Ngoku, nangona kunjalo, iphathwa ngamachiza amancinci, ayenza ikhuseleke ekhaya.
Umthi onzima weTropiki
Eziluncedo: Imithi ekhuni yetropiki ikho kuyo yonke indawo — cinga nge-ipe, cumaru, kunye ne-tigerwood, ukubala nje ezimbalwa. Ukhetho lwenene lokunethezeka, iinkuni ezilukhuni ezomileyo zi-grainy, zilukhuni, kwaye zihlala ixesha elide, kunye nokuthintela indalo kwimicimbi efana nokubola kunye nezinambuzane.
Bendlela: Kuyafana ne-redwood kunye nomsedare, beza nexabiso elihle (malunga ne- $ 8 ukuya kwi-12 yeedola ngeenyawo zekwere), kwaye bomelele, benza kube nzima ukubhola imingxunya kuzo. Awayamkeli amabala okanye agqibe kakuhle kakhulu, ke ukuba uzimisele ukongeza enye, qiniseka ukuba yenziwe ngokukodwa ngomthi onzima wetropiki. Ukuba ukhetha ukungangcolisi umgangatho, ngokuqinisekileyo sebenzisa i-UV-block block ecacileyo yokulondolozwa kwemithi yonke iminyaka emithathu ukuya kwemine-kuba, njengomsedare kunye ne-redwood, i-tropical hardwoods nayo imozulu kumbala wesilivere xa bengenawo amabala. Kubalulekile ukuba wazi ukuba uvela phi umthi wakho onzima wasetropiki: Khangela ezo zivela kwimithombo evunyiweyo ngokuzinzileyo.
Eziluncedo: Izinto eziguquguqukayo, ezisebenzayo, ezithandekayo, kunye nezala maxesha xa zenziwe kakuhle, ikhonkrithi yinto efanelekileyo yokumangalisa. Kanangcono? Kulula kakhulu ukucoceka.
Bendlela: Abanye banokuziva ngathi inezinto ezincinci kunezinye iindlela, kwaye kusenokutshisa kakhulu elangeni.
Eziluncedo: I-Redwood lolunye ukhetho oluhle ngokwendalo, kwaye yabelana ngeempawu ezininzi ngomthi womsedare-iitannins zendalo, ukukhanya okulula kodwa okuqinileyo, kunye nombala omhle. Nangona kunjalo, i-redwood ayifumaneki ngokulula, ngakumbi kwimimandla esempuma yelizwe. (Kungenxa yoko le nto kubiza ngaphezulu komsedare: malunga ne- $ 6 ukuya kwi-8 yeedola ngonyawo wesikwere.)
Bendlela: Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba zombini i-redwood kunye nemisedare ifuna ukuhlanjwa kwamandla ngonyaka, kunye nokugqitywa kwengubo rhoqo kwiminyaka emithathu ukuya kwemine. Oku akunzima kakhulu kwinkqubo yolondolozo ukuba uqiniseke, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka uyikhumbule!
UMFANEKISO: Nicole Franzen; UYILO: Abaqulunqi be-GRT
Eziluncedo: Izinto zokuhombisa ezidityanisiweyo zenziwe ikakhulu kwimicu yeenkuni kunye neeplastikhi ezenziwe ngokutsha, kwaye ziphakathi kokhetho olukhula ngokukhawuleza olukhoyo namhlanje. Kuba zenziwe ngokungeyonyani, azizukugoba okanye ziqhekeze, kwaye azichaphazeli ukubola okanye izinambuzane. Oku kubenza babe lukhetho olomeleleyo ngokwenyani, kuba abafuni kulondolozwa kakhulu.
Bendlela: Azinakugcinwa: Umngundo kunye nesikhunta zingakhula kwiindawo ezifumileyo, kwaye ekubeni ziyinxalenye yomthi, ezinye izinto ezinokuhlanganiswa zinokuphela zibonisa iimpawu zokubola. Banokuba kwicala lomthengi kuxhomekeke kwinkampani oyikhethileyo- ejikeleze i-7 ukuya kwi-10 yeedola ngonyawo wesikwere-kwaye kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukhetha inkampani edumileyo, ekumgangatho ophezulu.
imifanekiso yeetafile zasekhitshini
Eziluncedo: I-Bluestone inombala ocebileyo ngombala, uyindalo, kwaye idibana kakuhle noyilo lwesiko. Ikwayindawo entle engenantsimbi xa imanzi, iyenza ukuba ilungele ngokukodwa imimandla enemvula okanye iiyadi ezinamachibi okudada.
Bendlela: Inokuba shushu ngokungathandekiyo xa ilanga litshisa kuyo; I-travertine yindawo epholileyo yokuya kwelinye ilitye. Lindela ukuchitha i- $ 4- $ 8 ngeenyawo zenyawo, ngokwe UkuphuculaNet.com .
UMFANEKISO: UAnson Smart; Uyilo: iArente kunye nePyke
Eziluncedo: Uninzi lwabahlambululi bathanda imisedare kunye ne-redwood, ngokukodwa ngenxa yombala wabo oqaqambileyo, ocebileyo. Umthi womsedare unomtsalane wendalo kwaye ufumaneka ngokubanzi kwi-US. Ikwalula kakhulu, kodwa yomelele, iyenza ilungele iindawo ezineemeko zemozulu ezingazinzanga. Iqulethe iitannins kunye neeoyile ezenzeka ngokwendalo ezenza ukuba inganyangeki ukubola kunye nezinambuzane, kodwa unokuyiphatha ngebala kunye nokutywina ukuthintela iintanda okanye iintanda. Qaphela, kwakhona, ukuba awusebenzisi abakhuseli, umbala wemisedare yakho uya kutshintsha ube ngwevu ethambileyo ngokuhamba kwexesha.
Bendlela: Umcimbi ophambili lixabiso, elinganiselwa kwi- $ 3.75 ukuya kwi-5 yeedola ngeenyawo zenyawo. Kwaye qaphela ukuba zonke iintlobo zemisedare azifani: Amabakala amane angcono omsedare oza kuwasebenzisela ukuhombisa ziimpawu ezicacileyo, ezicacileyo zesiko, iqhina lokwakha, kunye neqhina lesiko (elidweliswe kwelona licace gca ukuya kwelona linamaqhina). Ke umhle xa uhamba, kokukhona iya kukuxabisa.
Tarek el moussa utata
Paola + Murray / trunkarchive.com
Eziluncedo: Okwangoku, kwendalo, ngoxolo, kunye nemibala, jika i-deck yakho ibe yingca yengca. Kukwabiza kakhulu ukufakela kunezinye ukuba uyimbewu (cinga: Iisenti ezisibhozo ukuya kwezingama-30 ngeenyawo ezisikwere !)
Bendlela: Gcina ukhumbula ukuba ingca ifuna ukukhanya kwelanga ukuze ichume. Kwaye ukuba uyisebenzisa njengezinto zakho zokuhombisa ezijikeleze iphuli yokubhukuda enetyuwa, inokufumana amabala amdaka xa amanzi eyitshiza.
Eziluncedo: Usenokuba awuzange ububone i-aluminium deck ngaphambili, kodwa bona yenza zikhona. Ziyakulungeleka ngeendlela ezininzi: Abayi kuba nomhlwa, i-warp, i-splinter, i-rot, okanye i-check, kwaye iyimozulu kunye ne-mold-resistant. Kuba awunakukhathazeka ngezinambuzane, kulula kakhulu ukuba uzinyamekele, kwaye ngekhe zixobule okanye zibe namadyungudyungu. Uyakonwabela ukwazi ukuba xa uthelekisa nomthi, umdibaniso, kunye nomthi weplastikhi, ukuhonjiswa kwealuminium kuphinda-phindwe kathathu ukuya kwesine kukhaphukhaphu, ukanti amaxesha amabini ukuya kwamathathu omelele.
Bendlela: Izinto ezintle azizi ngexabiso eliphantsi- eyona nto ibiza kakhulu kuzo zonke izinto onokukhetha kuzo, ialuminiyam ingena kumndilili weedola ezili-11 ngenyawo lesikwere, ezinye iinkampani zihamba ngaphezulu kunoko. Kananjalo awunawo umbala oqaqambileyo womthi onzima, ke qiniseka ukuba yimbonakalo olungeleyo ukuzincama ngenxa yokulungiselela.
izityalo zangaphakathi ngeentyatyambo
amagumbi okuhlala aluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka
UChristina kunye netarek yokwahlulahlula
hgtv amathambo alungileyo arhoxisiwe
U-linda phan utsale iscott